Ohaneze Island: Gbawara okooko osisi ma wuo Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
Chezọ maka mkpọtu na mkpọmkpọ ebe obodo ahụ, ma bie ndụ pụọ n'ichegbu onwe gị na egwuregwu dakọtara ọhụrụ “Ohaneze Island”🏝️!
Pịa windo mepere emepe, iku ume na ikuku ọhụrụ, ma nwee egwuregwu mgbagwoju anya & okooko osisi ndị siri ike 🌼 dị n'ụlọ ahịa gị dị n'akụkụ oké osimiri.
Dakọtara na gbawara mgbagwoju anya, wuo ma chepụta ụlọ ahịa gị, mee ndị enyi ọhụrụ, merie ụgwọ ọrụ, kpughee ihe omimi nke agwaetiti ahụ, wee bụrụ onye na-achọ ifuru ifuru nwere egwuregwu dị mfe ma na-atọ ụtọ.
Gbaa ụlọ ahịa ma bie nrọ ahụ n'àgwàetiti olileanya, ihunanya, na obi ụtọ!
・🏝️Ụlọ ahịa ifuru nke gị: dozie egwuregwu mgbagwoju anya, hapụ ihe okike gị, ma chepụta ụlọ ahịa ifuru gị site na drab ruo fab, niile dị ka masịrị gị! Tinye n'ime ngwá ụlọ, eto okooko osisi, imikpu maka ụgwọ ọrụ kwa ụbọchị, na ọbụna welie 😸pet🐶!
・🏝️Ere egwuregwu mgbagwoju anya pụrụ iche: egwuregwu & gbawara n'ime 2 kama egwuregwu ọdịnala-3! Chọpụta ọtụtụ ngwakọta na-agbawa agbawa, ụzọ egwu egwu, na ụgwọ ọrụ na egwuregwu. Kpọọ enyi gị ka ọ kpọọ egwu n'akụkụ ala osimiri & gbawara ọkwa nke okooko osisi!
・🏝️ Egwuregwu mgbagwoju anya dị iche iche: gafee 600 Ọkwa egwuregwu dakọtara na mgbata-na-agbawa nke MYBO mere, otu egwuregwu mmepe ama ama nke ROVIO kpọrọ maka mmepe ha nke egwuregwu egwuregwu dakọtara “Agbawara nnụnụ iwe”.
・🏝️ Zute ndị enyi gị & ndị ahịa: mara otu ihe nkedo ọhịa ma mee enyi na Lily Maka, Kiko Kilani, Lucas Ụtọ, na ụfọdụ ndị ọzọ.
・🏝️Ekpughere ihe nzuzo: inyocha odida obodo ọhụrụ nke agwaetiti ahụ, izute ndị agbata obi gị, ma nwee ọmarịcha akụkọ dị n'etiti agwa na egwuregwu ahụ. Na-agba akaebe nke ihunanya agbamakwụkwọ na chepụta saịtị gị okooko osisi!
・🏝️Ihe omume kwa izu: na-eweta ọkwa ịma aka mgbaghoju anya ọhụrụ iji mee ka egwuregwu gị dị ụtọ & nweta ụgwọ ọrụ!
・🏝️Kpọọ egwuregwu ahụ na-anọghị n'ịntanetị: etinyela ihe egwu na-agwụ ike oge ọzọ ị nweghị ike ịnweta ịntanetị, debe ụlọ ahịa gị oghe, ma nwee ọmarịcha ọkwa mgbaghoju anya n'ebe ọ bụla n'oge ọ bụla!
Ọ hụrụ n'anya na-egwu Ohana Island?
Obi ga-adị anyị ụtọ ịza ajụjụ gị ọ bụla ma ọ bụ nụ aro. Biko zitere anyị email na ozi kọntaktị:
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: Blast, wuo, CheatsHack, okooko osisi, Island, Ohana
← Egwuregwu Squid 3D 2022 – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Solitaire Tripeaks Meover – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →